Xulalka Bari & Sh. Dhexe oo u gudbay wareega 2-aad; Bakool & J. Dhexe oo ku haray wareega 1-aad ee ciyaaraha gobollada Somaliya. – Radio Daljir
Xulalka Bari & Sh. Dhexe oo u gudbay wareega 2-aad; Bakool & J. Dhexe oo ku haray wareega 1-aad ee ciyaaraha gobollada Somaliya.
Diseembar 24, 2010 12:00 b 0
Garowe, Dec 24 – Ciyaarihii galabta oo ay wada ciyaareen Groupka C oo laba ka mid ah ay u soo baxeen wareega 2-aad ayaa waxaa ciyaarii ugu horeysay wada yeeshay xulalka J. Dhexe & Bakool oo iyagu aan wax rajo ah aan ka lahayn ciyaaraha dambe, sabata oo ah waa ay hareen oo waxaa Groupkan ka soo baxay Sh. Dhexe & Bari oo iyaguna horay uga soo badiyay labadan xul.
Bakool v J. Dhexe
Ciyaartan oo aan wax micno ah ugu fadhiyin labadan xul ayaa waxaa ay ku bilaabtay dardar aan horay loo arag, waxayna xulka Ggobolka Bakool ay soo bandhigeen ciyaar aan horay looga baran; qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa xulka Bakool oo farsamo balaaran galabta wadatay waxaa ay dhalisay 3 gool oo si weyn u kala xiiso badnaa; waxaana qeybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay 3 daasi gool oo ay ciyaarta ku maamulaneysay xulka gobolka Bakool.
Wax yar kadib ayaa laysugu soo laabtay qeybtii 2-aad ee ciyaarta, waxaana sidoo kale ciyaarta sidii hore u wadatay xulka Bakool, waxaana mar kale u suurto gashay Bakool in ay dhaliso goolal kale.
Qeybtii 2-aad ee ciyaarta ayay xulka gobolka Bakool heshay oo ay dhalisay 2 gool, haseyeshee xulka J. Dhexe aad baa galabta ciyaarta looga siday, inkastoo 1 gool ay dhaliyeen, waxayna ciyaarta ku soo gabagabowday 5-1 oo ay ku adkaadeen xulka Bakool, walow aan laga rabin natiijadaasi maadaama ay horay uga hareen labadan xulka wareega 2-aad ee ciyaaraha gobollada Somaliya ee 18-aad.
Bari v Sh. Dhexe
Ciyaar kale oo xiiso gooni ah lahayd ayaa durbo bilaabatay taas oo u dhaxeysay xulalka Bari v Sh. Dhexe oo iyaguna ku jiray Groupka C. Ciyaartan ayaa iyaduna waxaa labada xul ay u kala tartamayeen sidii ay ugu soo kala bixi lahaayeen kaalinta 1-aad iyo 2-aad maadaa ay iyagu horay u soo cadeysteen in ay ka soo baxeen Groupka C.
Ciyaartan ayaa waxaa ay lahayd xamaasad gaar ah, waxayna labada xul ay soo bandhigeen ciyaar tayo iyo xirfad aad u balaaran leh; qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa xulka gobolka Sh. Dhexe uu helay gool si weyn looga soo shaqeeyay, taasoo qeybtii hore ee ciyaarta suurto gal ka dhigatay in lagu kala nasto.
Qaybtii 2-aad ee ciyaarta ayaa waxaa laysugu soo laabtay dardar iyo xamaasad, waxaana ciyaartan inteeda badan maamulaaysay ciyaarta xulka Sh. Dhexe, inkastoo xulka gobolka Bari-na uusan ka liidan. Qaybtii 2-aad ee ciyaarta markii ay wax yar ka harsaneyd ayay xulka gobolka Bari waxaa ay heleen gool taas oo ka dhigtay barbaro 1-1 ah, waxayna ciyaartu ay ku dhamaatay 1-1.
Groupkan C waxaa kaalinta 1-aad ku soo baxday xulka gobolka Bari, halka xulka Sh. Dhexe ay kaalinta 2-aad ay ku soo baxeen, waxayna sugayaan Groupka D xulalka ka soo baxa, iyagoo xulka Bari uu ka hortagi doono xulka Groupka D kaalinta 2-aad kaga soo baxa, Sh. Dhexe-na waxaa uu la ciyaari doonaa xulka kaalinta 1-aad kaga soo baxo Groupka D.
Hadii aan Groupyada A iyo B sida ay isugu soo aadeen aan dib ugu laabano: Xulka Nugaal oo Groupka A kaalinta 1-aad kaga soo baxay ayaa waxaa ay ku aadeen xulka gobolka Mugud ee Groupka B ah oo iyaguna kaalinta 2-aad ee Groupkaasi kaga soo baxay.
Xulka Gobolka Hiiraan oo Groupka A ah ayaa iyaguna waxaa ay ku aadeen Xulka Banaadir ee Groupka B oo kaalinta 1-aad ku soo baxay.
J. Hoose oo 2-1 uga badisay Sanaag & Baay oo 3-0 uga badasiday Galgaduud.